Ny fiainan'i Jesosy dia nirotsaka - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > toriteny > Ny fiainana ananan'i Jesosy
Androany dia tiako hampirisika anao hanaraka ny fananarana nomen’i Paoly ny fiangonana Filipiana. Nangataka azy hanao zavatra izy ary hasehoko anao ny momba izany, ary hangataka anao hanapa-kevitra ny hanao toy izany koa ianao.
Jesosy dia Andriamanitra tanteraka ary olombelona tanteraka. Andininy hafa izay miresaka ny fahaverezan'ny maha-Andriamanitra azy dia hita ao amin'ny Filipiana.
« Fa ho ao anatinareo izao toe-tsaina izao, izay tao amin’i Kristy Jesosy koa, Izay nanam-pahataperana an’Andriamanitra, dia tsy nihazona tahaka an’Andriamanitra ho tahaka ny mpandroba; fa nofoanany ny tenany, naka ny endriky ny mpanompo ary natao tahaka ny olona, ​​ary noforoniny tahaka ny olona tamin’ ny endriny ivelany, dia nanetry tena ka tonga nankatò hatramin’ ny fahafatesana, dia ny fahafatesana teo amin’ ny hazo fijaliana. Izany no nanandratan'Andriamanitra Azy ho ambonin'ny vahoaka rehetra sy nanomezany Azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handohalehan'ny lohalika rehetra izay any an-danitra sy etỳ an-tany ary any ambanin'ny tany, ary hiaiky ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo, ho voninahitr’Andriamanitra, » (Filipiana. 2,5- iray).
Te-hametraka zavatra roa miorina amin'ireto andininy ireto aho:
1. Inona no lazain’i Paoly momba ny toetran’i Jesosy.
2. Nahoana izy no miteny izany.
Rehefa avy nanapa-kevitra ny antony nilazany zavatra mikasika ny toetran'i Jesosy isika dia manana ny fanapahan-kevitray amin'ny taona ho avy. Na izany aza, mora azon'ny iray diso ny hevitry ny andininy 6-7 izay nomen'i Jesosy ny maha-Andriamanitra azy manontolo na tamin'ny ampahany. Nefa tsy nilaza izany i Paoly. Andeha isika handinika ireo andinin-tsoratra masina ireo ary hahita izay tena lazainy.
Izy dia tahaka ny endrik'Andriamanitra
Fanontaniana: inona no dikan'ny hoe endrika an'Andriamanitra?
Ny andininy 6-7 ihany no andininy ao amin'ny NT izay mirakitra ny teny grika hoe Paul
"Gestalt" dia ampiasaina, fa ny grika AT dia mirakitra inefatra.
Richter 8,18 « Ary hoy izy tamin'i Zebaka sy Zalmona: Nanao ahoana ireo lehilahy novonoinareo tao Tabara? Ary hoy izy ireo: Tahaka anao izy, samy tsara tarehy tahaka ny zanaky ny mpanjaka.
Job 4,16 "Nijoro teo izy ka tsy fantatro ny tarehiny, nisy endrika teo anoloan'ny masoko, nandre feo nibitsibitsika aho nanao hoe:"
Isaia 44,13 "Ny mpanao sokitra dia mamelatra ny tady, manoritra azy amin'ny penina, miasa azy amin'ny antsy sokitra ary mamoaka azy amin'ny kompà; ary ataony tahaka ny olona, ​​tahaka ny hatsaran-tarehin’ny olona, ​​ny hitoetra ao an-trano.
Daniel 3,19 « Dia tezitra Nebokadnezara, ary niova ny tarehiny, dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Nanome baiko izy fa ny fatana dia tokony hatao avo fito heny noho ny fanao mahazatra.
Paoly dia midika hoe [miaraka amina fehezanteny] ka izany no voninahitr'i Kristy sy ny fahalehibiazany. Nanana voninahitra sy fahalehibiazana izy ary ny insignia rehetra maha-Andriamanitra.
Mba hitovy amin'Andriamanitra
Ny fampitahana tsara indrindra amin'ny fitoviana dia hita ao amin'ny Jaona. Joh. 5,18 “Izany no vao mainka nitady hamono Azy ny Jiosy, satria tsy nandika ny Sabata ihany Izy, fa niantso an’Andriamanitra ho Rainy koa, ka nanao ny tenany ho mitovy amin’Andriamanitra”.
Nahatsiaro an'i Kristy izay mitovy amin'ny an'Andriamanitra i Kristy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, i Paoly dia nilaza fa manana ny fahalehibiazana feno Andriamanitra ary Jesosy dia tena Andriamanitra. Amin'ny ambaratonga olombelona dia mitovy ny fitenenana fa misy olona manana ny endrik'andriamanitra ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka ary tena fianakavian'ny mpanjaka izy.
Fantatsika izay rehetra mitovy amin'ny fianakavian'ny mpanjaka, fa tsy izany, ary mamaky momba ireo fianakavian'ny fianakavian'andriana sasany izay tsy mitovy amin'ny fianakavian'andriana isika. Jesosy dia samy nanana ny "fisehoana" sy ny toetran'ny andriamanitra.
voahazona toy ny halatra
Raha atao teny hafa, zavatra azonao ampiasaina ho tombontsoanao manokana. Tena mora ho an'ny olona manana tombontsoa ny mampiasa ny toerany ho tombontsoan'ny tsirairay manokana. Hahazo fitsaboana tsara indrindra ianao. Nilaza i Paoly fa na dia Andriamanitra sady endrika sy inti aza i Jesosy, dia tsy nanararaotra an'io tranga io amin'ny maha-olombelona azy. Ny andininy faha-7-8 dia mampiseho fa mifanohitra amin'ny fihetsiny ny fihetsiny.
Jesosy nanaratsy ny tenany
Inona no nolazainy? Ny valiny dia: tsy misy. Andriamanitra tanteraka izy. Tsy afaka mijanona Andriamanitra na dia vetivety foana aza Andriamanitra. Tsy namoy ny toetran'Andriamanitra na ny fahefana ananany izy. Nanao fahagagana izy. Afaka namaky saina izy. Nampiasa ny heriny izy. Ary tamin'ny fiovan-tarehy dia nasehony ny voninahiny.
Ny tian'i Paoly eto dia azo jerena amin'ny andininy hafa izay ampiasainy ny teny ho an'ny "teny".
1. Kor. 9,15 «Nefa tsy nampiasako ireo [ireo zo ireo]; Tsy nanoratra an'ity koa aho mba hitazonana izany amiko. Aleoko maty toy izay hanimba ny lazako!
“Nafoiny avokoa ny zony rehetra” (GN1997), “tsy nikiry tamin’ny zony izy. Tsia, nandà izany izy »(Fanantenana ho an'ny mpandika teny rehetra). Tamin’ny maha-olombelona azy, i Jesosy dia tsy nampiasa ny toetrany na ny heriny ho an’ny tombontsoany manokana. Nampiasainy hitory ny Filazantsara, hampiofanana ny mpianatra, sns. - fa tsy hanamora ny fiainany mihitsy. Raha lazaina amin’ny teny hafa dia tsy nampiasa ny heriny ho amin’ny tombontsoany manokana izy.
Ny fitsapana sarotra any an-efitra.
Rehefa tsy niantso afo avy tany an-danitra Izy handringana ireo tanàna tsy mpinamana.
Ny fanomboana. (Nilaza izy fa afaka niantso ny tafiky ny anjely ho fiarovana azy.)
Nanolotsany an-tsitrapo ny tombontsoa rehetra azony natao ho an'Andriamanitra ho fandraisana anjara tanteraka amin'ny maha-olombelona antsika. Andao hamaky ny andininy faha-5-8 isika ary hahita mazava hoe mazava be izao hevitra izao.
Filipo. 2,5-8 «Fa ho ao anatinareo izao toe-tsaina izao, izay tao amin’i Kristy Jesosy koa, 6 izay, fony Izy nanana ny endrik’Andriamanitra, dia tsy nihazona tahaka an’Andriamanitra ho tahaka ny mpandroba; 7 fa nofoanany ny tenany, dia naka ny endriky ny mpanompo izy ka tonga tahaka ny olona, ​​ary tamin’ ny endriny ivelany dia noforonina tahaka ny olona Izy, 8 dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ ny fahafatesana, dia hatramin’ ny fahafatesana teo amin’ ny hazo fijaliana.
Avy eo i Paoly dia mamarana amin’ny filazana fa nanandratra an’i Kristy ho ambonin’ny olombelona rehetra Andriamanitra tamin’ny farany. Filipo. 2,9
«Izany no nahatonga an'Andriamanitra nanandratra azy ho ambonin'ny olona rehetra ka nanome azy anarana ambonin'izy rehetra. Ka amin'ny anaran'i Jesosy dia ny lohalika rehetra any an-danitra sy et earth an-tany sy ambanin'ny tany ary ny fiteny rehetra no manaiky fa Jesosy Kristy no Tompo, ho voninahitr'Andriamanitra Ray. »
Koa misy dingana telo:
Ny zon'i Kristy sy ny tombontsoany ho Andriamanitra.
Ny safidiny dia ny tsy hampiasa ireo zo ireo, fa ho tonga mpanompo.
Ny fisondrony farany amin'ny vokatr'ity fiainana ity.
Tombontsoa - fahavonona ny serivisy - mitombo
Ankehitriny ny fanontaniana lehibe kokoa dia ny hoe nahoana ireo andininy ireo no ao amin'ny Filipiana? Voalohany dia mila mitadidy isika fa ny Filipiana dia taratasy nosoratana ho an’ny fiangonana manokana amin’ny fotoana manokana noho ny antony manokana. Noho izany, izay nolazain'i Paoly ao amin'ny 2,5-11 milaza fa misy ifandraisany amin'ny tanjon'ny taratasy iray manontolo.
Voalohany, tokony hotsaroantsika fa rehefa nitsidika voalohany an’i Filipy i Paoly ary nanorina ny Fiangonana tany, dia nosamborina izy (Asa 1 Des.6,11-40). Nafana ihany anefa ny fifandraisany tamin’ny Fiangonana hatramin’ny voalohany. Filipianina 1,3-5 "Misaotra an'Andriamanitro aho isaky ny mahatsiaro anareo, 4 amin'ny fifonana amim-pifaliana mandrakariva amin'ny fivavahako ho anareo rehetra, 5 noho ny fiombonanareo amin'ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny."
Izy no manoratra ity taratasy avy any am-ponja any Roma ity. Filipianina 1,7 « Rariny ny hiheverako anareo rehetra izany, satria ato am-poko no itondrako anareo, dia ianareo rehetra izay miara-miombona amiko amin’ny fahasoavana, na amin’ny gadrako, na amin’ny fiarovana sy ny fanamafisana ny filazantsara.
Nefa tsy sorena na tsy diso fanantenana izy, fa faly.
FIL 2,1718 “Fa na dia haidina toy ny fanatitra aidina aza aho noho ny sorona sy ny fanompoam-pisoronana momba ny finoanareo, dia faly sy mifaly aminareo rehetra aho; 18 dia toy izany koa no tokony hifalianareo sy hiara-mifaly amiko!”
Na dia nanoratra an’io taratasy io aza izy, dia mbola nazoto nanohana azy ireo hatrany. Filipo. 4,15-18 «Ary fantatrareo koa, ry Filipiana, fa tamin’ny niandohan’ny [fitoriana] ny filazantsara, raha niala tany Makedonia aho, dia tsy nisy fiangonana nizara tamiko ny amin’ny fidiram-bola sy ny fandaniana, afa-tsy ianareo ihany; 16 Eny, na dia tany Tesalonika aza ianareo, dia nandefa zavatra ho ahy indray mandeha na indroa aza ianareo. 17 Tsy ny hangataka fanomezana akory no angatahiko, fa ny mba hahavokatra betsaka noho ny aminareo. 18 Manana ny zavatra rehetra aho sady manana amby ampy; Efa voakarakara tsara aho hatramin’ny nandraisako ny fanomezanareo avy tamin’i Epafrodito, fanatitra mahafinaritra sy sitrak’Andriamanitra.
Ny feon'ny taratasy dia manondro fifandraisana akaiky, vondrom-pitiavana kristiana matanjaka ary fahavononana hanompo sy hijaly ho an'ny filazantsara. Fa misy kosa ny famantarana fa tsy araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra.
FIL 1,27 "Fa ataovy miendrika ny filazantsaran'i Kristy ihany ny fiainanareo, ka na ho avy aho ka hahita anareo, na tsy eo, dia reko fa miorina tsara amin'ny fanahy iray ianareo ary miady ho an'ny finoana ny filazantsara."
"Tariho ny fiainanao" - Grika. Politeuesthe dia midika ny fanatanterahana ny andraikiny amin'ny maha olompirenena azy ireo.
Miahy i Paul satria hiteny fa tena henjana ny fihetsika manoloana ny fiarahamonina sy ny fifankatiavana izay hita taloha tao Filipy. Ny tsy fitovian-kevitra anaty dia manohintohina ny fitiavana, ny firaisana ary ny fiarahamonina.
Filipianina 2,14 "Ataovy tsy misy fitarainana na fisalasalana ny zava-drehetra."
Filipo. 4,2-3 «Mananatra an’i Evodia aho ary mananatra an’i Syntyke mba ho iray saina ao amin’ny Tompo.
3 Ary miangavy anao koa, ilay mpiara-miasa tsy mivadika amiko, mba hikarakara ireo miady amiko noho izany, miaraka amin'ny Clemens sy ireo mpiasa hafa, izay ao amin'ny Bokin'ny fiainana ny anarany. »
Raha fintinina dia niady ny vondrom-pinoana rehefa lasa olona tia tena sy miavonavona ny sasany.
Filipo. 2,1-4 « Raha misy fananarana ao amin’i Kristy ankehitriny, misy fampiononana avy amin’ny fitiavana, misy firaisana amin’ny fanahy, misy hafanana sy famindram-po, 2 dia tonga tanteraka ny fifaliako, satria miray saina ianareo, miray fitiavana; miray hina ary mahatsiaro ny zavatra iray. 3Aza manao na inona na inona noho ny fitiavan-tena na ny fitsiriritana foana, fa hajao amim-panetren-tena ny hafa noho ny tenanao.
Hitantsika eto ireto olana manaraka ireto:
1. Misy ny fifandonana.
2. Misy ny ady fahefana.
3. Fatra-paniry laza ianao.
4. Mieboebo izy ireo ka miziriziry amin’ny lalany.
5. Izany dia mampiseho ny fanombantombanana ambony tafahoatra.
Miahy izay hahasoa azy manokana izy ireo.
Mora latsaka amin'ireo fanovana rehetra ireo. Efa hitako tao aminy sy tao anatin'ny taona maro izay aho. Mora koa ny manjary jamba satria tsy mety ho an'ny kristiana izany fihetsika izany. Ny andininy faha-5-11 dia mijery ny ohatr'i Jesosy hamela ny rivotra amin'ny avonavona rehetra sy ny fitiavan-tena izay mora mandroba antsika.
Hoy i Paoly: Heverinao ve fa tsara kokoa noho ny hafa ianao ary mendrika ny haja sy manaja avy ao amin'ny fiarahamonina? Diniho hoe tena lehibe sy mahery i Kristy. Hoy i Paul: Tsy te hanaiky ny hafa ianao, tsy te-hanompo nefa tsy ekena, ho sosotra ianao satria heverin'ny sasany ho nomena anao? Mieritrereta izay tian'i Kristy hatao tsy misy.
"Ao amin'ny boky iray momba ny Exit Interviews Exit Interviews, hoy i William Hendrick
momba ny fianarana nataony momba ireo izay nandao ny fiangonana. Betsaka ny olona 'mitombo ny fiangonana' mitsangana eo am-baravaran'ny fiangonana ary manontany ny olona ny antony nahatongavany. Amin'izany fomba izany, ny olona iray dia te-hanandrana mameno ny 'zavatra takian'ny' olona tadiavinao. Fa vitsy, raha misy, mijanona eo am-baravarana any aoriana hanontany hoe maninona no lasa izy ireo. Izany no nataon'i Hendricks, ary azo antoka ny vakiteny.
Rehefa namaky ny fanehoan-kevitra avy amin’ireo izay lasa aho dia talanjona (miaraka amin’ireo fanehoan-kevitra somary feno hevi-baovao sy maharary avy amin’ireo olona misaina izay nandao) ny zavatra nandrasan’ny olona sasany ny Fiangonana. Naniry ny karazan-javatra rehetra tsy ilaina amin’ny fiangonana izy ireo; toy ny hoe ankasitrahana, mandray 'fofoka' ary manantena ny hafa hanome izay ilainy rehetra tsy misy adidy amin'ny tenany manokana mba hanomezana izay ilain'ny hafa "(The Plain Truth, Jan 2000, 23).
I Kristy dia nanondro ny Kristiana ho an'i Kristy. Mamporisika azy ireo hanana ny fiainany ao anatin'ny fiaraha-monina Kristiana tahaka an'i Kristy. Raha niaina toy izany izy ireo, dia hanome voninahitra azy ireo tahaka ny nataony tamin'i Kristy.
"Fa io fanahy io dia ao aminao, izay tao amin'i Kristy Jesosy, 6 izay, raha nitovy endrika tamin'Andriamanitra izy, dia tsy nitazona tahaka ny andriamanitra; 7 fa nanao ny tenany izy, naka ny endrika ho mpanompo ary nitovy endrika tamin'ny olona, ​​ary tamin'ny endriny ivelany toa ny olona, ​​8 dia nanetry tena izy ka nanaiky ny fahafatesana, eny, na dia teo amin'ny hazo fijaliana aza. 9 Izany no antony nanandratan'Andriamanitra azy ho ambonin'ny olona rehetra ka nomeny anarana ambonin'izy rehetra, 10 ka amin'ny anaran'i Jesosy dia mandohalika daholo izay any an-danitra sy et earth an-tany ary ambanin'ny tany, 11 ary ny fiteny rehetra ekeo fa Jesosy Kristy no Tompo, ho voninahitr'Andriamanitra Ray. »
Nilaza i Paoly fa ny fanatanterahana ny adidiny manokana amin’ny maha-olom-pirenen’ny fanjakana any an-danitra dia maneho ny tenany tahaka ny nataon’i Jesosy sy manaiky ny andraikitry ny mpanompo. Tsy maintsy mahafoy tena tsy mba hahazo fahasoavana ihany fa hijaly koa (1,57.29-30). Filipo. 1,29 « Fa nomena anareo ny fahasoavana momba an’i Kristy, tsy ny hino Azy ihany, fa ny hijaly koa noho ny aminy.
Tokony ho vonona hanompo ny hafa ny olona iray (2,17) Ho "arotsaka" - hanana toe-tsaina sy fomba fiaina tsy mitovy amin'ny soatoavin'izao tontolo izao (3,18-19). Filipo. 2,17 « Fa na dia haidina toy ny fanatitra aidina aza aho noho ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanompoam-pisoronana ny finoanareo, dia faly sy faly miaraka aminareo rehetra aho.
Filipo. 3,1819 Fa maro no mandeha, araka ny voalazako matetika taminareo, fa ankehitriny kosa dia mitomany ianareo, satria fahavalon’ny hazo fijalian’i Kristy; 19 Fahaverezana no hiafarany, ny kibony no Andriamaniny, ny fahamenarany no ho reharehany, ary ny etỳ an-tany no ifantohany.
Mila mampiseho fanetren-tena ianao mba hahatakaranao fa ny hoe ao amin'i Kristy dia midika hoe mpanompo satria Kristy tonga teto amin'izao tontolo izao tsy ho Tompo fa mpanompo. ,
Mety hampidi-doza ny fitiavan-tena amin'ny tombotsoan'ny hafa, ary koa ny fampiroboroboana avonavona izay avy amin'ny fireharehana amin'ny toe-javatra misy azy, ny talentany, na ny vokatry ny fahombiazana.
Ny vahaolana amin'ny olana amin'ny fifandraisana interpersonal dia mitoetra amin'ny fifanetren-tena miaraka amin'ny hafa. Ny fanahin'ny fahafoizan-tena dia fanehoana ny fitiavana ny fitiavana hafa hazavaina ao amin'i Kristy, izay "mankatò hatramin'ny fahafatesana, eny, hatramin'ny fahafatesana"!
Ny tena mpiasa dia maneho ny tenany.I Paoly dia mampiasa an'i Kristy hanazavana izany. Manan-jo tsy hisafidy ny lalan'ny mpanompo izy, fa afaka mitaky ny toerany ara-dalàna.
Nilaza i Paul fa tsy misy toeran'ny fivavahana tsara izay tsy mampihatra amin'ny maha-mpanompo azy. Tsy misy koa ny toerana misy ny fahamendrehana izay tsy manintona na mamoaka tanteraka ho an'ny tombontsoan'ny hafa aza.
Miaina anaty fiarahamonina anjakan'ny fitiavan-tena isika, voan'ny filozofia "izaho aloha" ary miendrika filam-banin'ny fahombiazana sy fahombiazana. Saingy tsy ny soatoavin'ny fiangonana araka ny famaritan'i Kristy sy i Paoly. Ny tenan'i Kristy dia tsy maintsy mikendry ny fanetren-tena sy ny firaisan-tsaina ary ny fiarahana amin'ny kristiana. Tsy maintsy manompo ny hafa isika ary mihevitra izany ho adidintsika voalohany amin'ny fitiavana tonga lafatra amin'ny asa. Ny toe-tsain'i Kristy, toy ny fanetren-tena, dia tsy mitaky ny zon'ny na fiarovana ny tombontsoan'ny tena, fa vonona hanompo foana.